Xeer-Dhaqameedka (Xeer Ciise) | Xariirad News Network Hoyga Wararka Sugan	Home
Friday, August 17th, 2012 | Posted by xariirad Xeer-Dhaqameedka (Xeer Ciise)
Sannadkan 2010ka waxa Jabuuti ka soo baxay oo la daabacay buug cusub oo aad iyo aad u qiima badan oo magaciisu yahay XEER-CIISE. Buuggan sida magaciisu tilmaamayo waxa ku qoran XEER-CIISE oo ah ka keliya ee ka nool xeerashii Soomaalida. Waa buuggii u horreeyey oo af-soomaali ku qoran oo si faahfaahsan uga warramaya XEER-CIISE iyo qodobbadiisa.
Xeerka Ciisaha oo badhtamihii qarnigii 16aad loo fadhiistay isla qarnigaana la dhammays tiray ayaa ahaa tan iyo waagaa mid facba fac ka soo tebinayey sidaana nagu soo gaadhay.
Buuggu waxa uu ka kooban yahay 253bog oo xambaarsan 9 cutub oo kala ah sidan:
Cutubka koowaad, oo ka warramaya bilawgii Xeerka,dhulka, maahmaahyada Xeerka iyo qodobbo kale.
Cutubka labaad, oo ka warramaya qodobbada Dhiigga
Cutubka saddexaad, oo ka warramaya xeerka Dheerta
Cutubka afraad, waxa uu ka warramayaa xeerka Dhaqaaqil
Cutubkaa shanaad,waxa uu ka warramayaa xeerrar qubane ah
Cutubka lixaad,waxa uu ka warramayaa xeerka kab Ugaas
Cutubka toddobaad, qabashadii Ugaaska cusub
Cutubka siddeedaad,waxa uu ka warramaya garnaq la qaaday
Cutubka sagaalaad,waxa lagu soo qaatay rag ka mid ah geesiyaashii hore ee nabadda iyo xeerka ku dhaadan jirey amma dadka wax taray.
Buugga waxa qoray Cabdalla Xaaji Cusmaan oo ka tirsan (R.T.D.) Golaha Raadiyooga iyo Telefishanka Jabuuti, waa kayd hayaha isla markaana qaabilsan dhaqanka iyo suugaanta. Inta badan qodobbada xeerka ee ku qoran buugga waxa uu ka qoray ruug-caddaaga la yidhaa Jaamac Muuse Miicaad.
U dambayn ciddii danaynaysa buuggan waxay kala xidhiidhi kartaa isla qoraaga buuggan XEER-CIISE, Cabdalla Xaaji oo cinwaankiisu yahay sidan:
Email: cabdalla_xaaj@yahoo.fr Tel: guriga 00253355266 Mob: 00253 612331 Jabuuti (Jam. Jabuuti) Short URL: http://www.xariiradnews.com/?p=5188
xariiradnews@gmail.com Posted by xariirad on Aug 17 2012. Filed under somaali.